Compass: Chọpụta Àgwà Na-eme Ka Njide Ndị Ahịa | Martech Zone
Tuzdee, Machị 8, 2016 Tuzdee, Machị 8, 2016 Douglas Karr
Dị ka a ọmụmụ site na Econsultancy na Oracle Marketing Cloud, 40% nke ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na nnweta karịa njigide. Atụmatụ na-agbasa bụ na ọ na-efu okpukpu ise karịa iji dọta onye ahịa ọhụrụ karịa ijide nke ugbu a.
Ọbụna nke ka mkpa, n'echiche m, abụghị ụgwọ nke inweta ma ọ bụ ijide onye ahịa, ọ bụ ego na uru nke ịgbatị ndụ nke onye ahịa na-enyere n'ezie ụlọ ọrụ aka ịrụ ọrụ. Ma nke a anaghị echebara mmetụta nke ndị ahịa na-enwe obi ụtọ ugbu a na-adọta ndị ahịa ọhụrụ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, njigide dị ike dị ka ijikọ mmasị si na akaụntụ ezumike nka gị.
Compass site na Amplitude na-enye ndị mmepe ikpo okwu ohere ịlele omume onye ọrụ wee gosipụta mmetụta nke omume ndị ahụ na njide gị niile. Y’oburu n’amata nke a, inwere ike igbalite ya tinye n’igwe ma wulite ebe nyiwe gi iji kwado njigide.
Kompas na-enyocha site na njirimara onye ọrụ gị ma chọpụta omume ndị kachasị ebu amụma banyere njide. Ghọta omume ndị a bụ isi ihe na-eme ka ngwaahịa gị ka mma ma na-eme ka ọ na-eto eto.
The ụlọ ọrụ nwere ikpe ọmụmụ si QuizUp, otu n'ime ngwa ngwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ahịa. Site na nyocha omume ndị ahịa, ha nwere ike melite njigide onye ọrụ ha.
Nke a bụ nhụchalụ nke kompas.
Tags: njupụtanjupụta site compasscompassnjigide ndị ahịanyocha njigide ndị ahịanjide njide